वेबसाइट पुन: डिजाइन: अधिक वेबसाइट रूपान्तरणहरू उत्पन्न गर्ने प्रक्रिया | Martech Zone
वेबसाइट पुन: डिजाइन: अधिक वेबसाइट रूपान्तरणहरू उत्पन्न गर्ने प्रक्रिया
शुक्रवार, नोभेम्बर ०,, २०२० शुक्रवार, नोभेम्बर ०,, २०२० एशले मार्श
के तपाईंले भर्खरै एउटा व्यवसाय सुरु गर्नुभयो र यसलाई प्रकाशको गतिमा फस्टाउनको सपना देख्नुभयो? यद्यपि, एक आशाजनक विचार र उत्तम गुणको उत्पादन भएको ग्राहकहरूलाई भित्र जानको लागि पर्याप्त छैन। यदि तपाईंको ब्रान्ड केहि पुग्न पुगेको छ र तपाईं आफ्नो सफलताको लागि मुखको शब्दमा भर पर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई उज्ज्वल भविष्यको लागि एक दशक लाग्नेछ। ।
तपाईंको व्यवसायको बिक्री बढावा गर्न वेबसाइट
टेक्नोलोजीको यस संसारमा, सहस्राब्दीलाई पुर्‍याउन वेबसाइट विकास आवश्यक छ। यसले तपाईको व्यवसायको ब्रान्डि inमा मात्र सहयोग पुर्‍याउँछ यसले ग्राहकहरुलाई मूल्य पनि दिन्छ।
किन तपाइँको कम्पनीमा ग्राहकको लागि घण्टा कुर्ने प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जब तपाइँ एकै समयमा धेरै पाउन सक्नुहुन्छ? वेबसाइट निर्माण अधिक लागत छैन, तपाइँको चिन्ताको लागि तर निश्चित रूपमा तपाइँको व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा पाउन्ड गर्नेछ। एक राम्रो विकसित वेबसाइट को साथ, तपाईं आफ्नो आला बजार लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण, हामी यहाँ वेबसाइट डिजाइनका केही फाइदाहरू साझा गर्दछौं जसले तपाईंको व्यवसायलाई बढावा दिन्छ।
समय र ऊर्जा बचतकर्ता: तपाईंको उत्पादन ग्राहकलाई प्रदर्शन गर्नु र बिक्री नगरी छोड्नु ठूलो निराशा हो। तपाईंको आफ्नै वेबसाइट निर्माण गर्नाले ग्राहकलाई उत्पादन जाँच गर्न र कुनै समस्या बिना अर्डर राख्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको ब्रान्डको मान्यता: वेबसाइट निर्माणले अधिक र अधिक ग्राहकहरूमा तपाईंको ब्रान्ड पुग्न मद्दत गर्दछ। साथै, नयाँ सुरुवातकर्ताहरू, साथै छुटहरू जुन तपाईं ग्राहकहरूलाई प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, प्रदर्शन गर्न सकिन्छ।
अधिक ग्राहकहरू कब्जा गर्न मध्यम: एक आकर्षक वेबसाइट अधिक ट्राफिक प्राप्त गर्नेछ। गतिशील वेबसाइटले अधिक वफादार रूपान्तरण र तपाइँको व्यवसाय को लागी रेफरल मद्दत गर्दछ। ग्राहकहरु तपाइँको ब्यापार प्रख्यात प्रयास प्रिमियम र अपडेट सूचना जाँच गर्न सक्षम हुनेछ।
तपाइँको उत्पादन को बारे मा जानकारी: तपाई संक्षिप्त हुनुपर्दछ साथै तपाई के बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ सटीक पनि हुनुपर्दछ। यदि उपभोक्ता तपाईं संग कनेक्ट हुन सकेन, त्यसपछि ऊ / उनी पछाडि उछाल गर्न सक्छन्। प्रशस्तिपत्रहरू जोडेर प्रयोगकर्ता अन्तर्क्रिया सक्षम पार्नु तपाईंको व्यवसायको लागि ठूलो सहायता हुन सक्छ।
तपाईंको व्यवसायमा बिभिन्न तकनीकी समाधानहरू थपेमा सम्भावित ग्राहकहरू, तपाईंको उद्यमको गम्भीरता देखिनेछ। त्यसकारण, सफलताको मिठासको स्वाद लिन तपाईंसँग आफ्नै एक डिजाइन गरिएको वेबसाइट हुनुपर्दछ। तपाईंसँग तपाईंको वेबसाइटमा नियन्त्रण हुन सक्छ र तपाईंको सामग्री हराउँदा बिना कुनै फरक वेब होस्टमा जान सक्नुहुनेछ।
वेबसाइट विकास तपाईंलाई छिटै तपाईंको व्यवसाय सुरू गर्न मद्दत गर्दछ, तर त्यहाँ केहि कम छन्, जसले वेबसाइट डिजाइन पछि अधिक यातायात उत्पन्न गर्न सकेन। जे होस्, तथ्या .्कले भन्छ कि of 88% प्रयोगकर्ताहरूले खराब अनुभव पछि तपाईंको वेबसाइटमा राख्दैनन्। यो भइरहेको हुन सक्छ, यदि तपाईं उही पुरानो वेबसाइट चलाइरहनु भएको छ। ट्रेंड वेबसाईटहरू परिवर्तन गर्न जस्तै डिजिटल रूपान्तरणहरूको लागि पनि नयाँ डिजाइन आवश्यक छ।
किन वेबसाइट पुन: डिजाइन गर्नु महत्वपूर्ण छ?
हामी वेबसाइट निर्माण गर्दछ विश्वसनीयता प्राप्त गर्न र अधिक राजस्व प्राप्त गर्न। तपाईंको वेबसाइट राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छ, तर प्रयोगकर्ता एक राम्रो अनुभव प्रदान गर्न र तिनीहरूलाई फिर्ता आउन राख्न तपाईं आफ्नो वेबसाइट अपडेट गर्न आवश्यक छ। तपाइँको प्रामाणिकता प्रदान र प्रमाणिकरणहरू तपाइँको वेबसाइटमा वफादार प्रयोगकर्ताहरूलाई बाँध्न उत्तम तरिका हो। हामी केहि दिमाग चलाउने तथ्या .्कहरू साझा गर्दछौं, जसको लागि तपाईंलाई तपाईंले जान्नु आवश्यक पर्दछ डिजिटल परिवर्तन:
बढ्दो प्रतिस्पर्धाको साथ,% 83% व्यवसायले बिना वेबसाइटको तुलनामा वेबसाइटको साथ नाफा कमाएको छ।
वेबसाइट पुनः डिजाइनका साथ, %०% सानो व्यापार उपक्रमहरूले ग्राहक अनुभवहरू सुधार गरेका छन्।
बढि नेतृत्व उत्पादन गर्न, %२% संगठनहरूले आरओआई गणना गर्न बजार रणनीति लागू गर्दछ (लगानीमा रिटर्न) १.72 गुणा बढी क्वान्टम प्राप्त गर्दै।
SLA (सेवा स्तर सम्झौता) तपाइँको वेबसाइट को लागी effective 85% कम्पनीहरु द्वारा अनुमोदित सबैभन्दा प्रभावकारी बजार रणनीति हो।
अन्तर्क्रियात्मक सामग्री, भिडियोहरू तपाइँको वेबसाइटको ल्यान्डि page पृष्ठमा पुन: डिजाइन गर्ने क्रममा थप्नाले 86 XNUMX% ले नेतृत्व बढाउनेछ।
तपाइँको वेबसाइटमा केहि अंशलाई बेवास्ता गर्दा तपाइँको ट्राफिक जेनेरमा असर पर्न सक्छ, तपाइँलाई ट्युन अप गर्न आवश्यक पर्दछ। तपाईंको वेबसाइटलाई समय-समयमा अनुकूलन गर्ने, टुटेका लिंकहरूको लागि जाँच गर्दा र सही पोर्टलमा पृष्ठहरू पुनःनिर्देशित गर्दा कम्पनीको दीर्घायु बढ्न सक्छ।
वेबसाईटलाई पुन: डिजाइन गर्नका लागि कारणहरू
डिजिटल रूपान्तरणको लागि, मार्केटिंग रणनीतिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। देखि, सबै संगठनहरू बिक्री, नेतृत्व रूपान्तरणको उद्देश्य मा काम गर्दछ। पछिल्लो टेक्नोलोजिकल उपकरणहरूको साथ वेबसाइटहरू अपडेट गर्नाले तपाईंको वेबसाइट प्रकृतिमा गतिशील रहनेछ। ग्राहक अन्तर्क्रियाले फीडब्याक जम्मा गरेर तपाइँको वेबसाइटलाई सुधार गर्न पिट होलहरू बुझ्न मद्दत गर्दछ। प्रयोगकर्ताको आवश्यकताको डाटा जम्मा गर्नुहोस् र नयाँ डिजाइनहरू एकीकृत गर्दा राम्रो grasps प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तसर्थ, तपाईं आफ्नो वेबसाइट पुन: डिजाइनको लागि आवश्यक प्रभावकारी कारणहरूको जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रयोगकर्ताहरूलाई कायम राख्दै:
जब तपाइँ एक प्रयोगकर्तालाई सहि जानकारी दिनुहुन्छ ऊ / उनी एक आकर्षक लेआउटको साथ खोजी गर्दैछ जुन तपाइँ प्रयोगकर्ताहरूलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको वेबसाइट बनाएर, द्रुत उत्तरदायीसँग राम्रो यूएक्स उत्पन्न रूपान्तरण हुनेछ।
उपयोगिता र ब्रान्डको दृश्यता:
के हुन्छ यदि तपाईंले वेबसाइट सिर्जना गर्नुभयो जुन तपाईंले प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रदान गर्नुभएको सेवाहरू पूरा गर्न असमर्थ छ? जब तपाईं रणनीतिक लक्ष्यहरूको साथ प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकताहरू पign्क्तिबद्ध गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई वेबसाइट पहुँच गर्न सजिलो प्रदान गर्दछ, तपाईं द्रुत प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ।
नयाँ वेब उपकरणसँग मिल्दो:
तपाईंको वेबसाइटमा सुविधाहरू र नयाँ उपकरणहरू थप्ने पर्याप्त छैन। प्रयोगकर्ताको अनुभव सुधार गर्न बाह्य सफ्टवेयरको साथ एकीकरण हुनु आवश्यक छ। हामीलाई नयाँ वेबसाइटको आवश्यक पर्दछ जुन नयाँ टेक्नोलोजीहरूसँग कन्फिगर गर्न सक्दछ जुन डेटा सिर्जना, व्यवस्थापन र परीक्षण मद्दत गर्दछ।
डिजिटल रूपान्तरण र रूपान्तरण:
समावेश CRM उपकरण आफ्नो वेबसाइट सुधार गर्न को लागी यसको प्रदर्शन सुधार गरीएको छ। धेरै पप-अप विज्ञापनहरू प्रयोग गर्ने बेवास्ता गर्दै, जानकारीपूर्ण ब्लगहरू र लेखहरू थप्न एक सकारात्मक प्रभाव र तपाइँको वेबसाइट मा पकड एक कारण सिर्जना।
पीसी र मोबाइलमा सजिलैसँग पहुँचयोग्य:
के तपाईंलाई थाहा छ, इन्टरनेट पहुँच गर्न एक तिहाई प्रयोगकर्ताहरूले स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन्? तसर्थ, तिनीहरू एक वेबसाइट मन पराउँछन् जुन कुनै पनि उपकरणमा कहिँ पनि पहुँच गर्न सकिन्छ। तपाइँको वेबसाइट को लागी मोबाइल को लागी जानकारी प्राप्त गर्न को लागी मोबाइल अनुकूलित हुनु पर्छ।
अनलाइन व्यवसायमा प्रभावी दीर्घकालीन विकासको चाहना यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइट अपडेट गर्न जारी राख्नुहुन्छ भने सम्भव छ। नयाँ डिजाइनको साथ तपाईंको वेबसाइट ईन्धन र अवधारणाहरू परीक्षण, उपकरण एकीकरण, प्रयोगकर्ताको दिमागको अगाडि राखेर रूपान्तरणमा मद्दत गर्दछ। उपभोक्ता अन्तर्क्रियाले वेबसाइटको विकासको साथै तपाईंको अनलाइन व्यवसायलाई बढि बढि नेतृत्व दिन्छ।
टैग: विकासवेब विकासवेबसाइट डिजाइनवेबसाइट डिजाइन प्रवृत्ति
एशले मार्श एक वरिष्ठ सामग्री सामग्री लेखक छन् मान सॉफ्टवेयर इंक। उनी विगत चार बर्षदेखि यस कम्पनीसँग छिन्। उनी प्राविधिक लेखन विधामा विशेष गरी मोबाइल विकास, वेब डिजाइन, र, नयाँ टेक्नोलोजीमा विशेषज्ञ छन्। उनको अनुसार, यो उनको लागि ठूलो एक्सपोजर भएको छ किनकि हरेक दिन टेक्नोलोजीले आफैंलाई अपडेट गरिरहेको छ नया परिणामहरु जसले उनलाई दैनिक ताजा राख्छ।
नेटिभ विज्ञापन: तपाइँको उत्पादनहरु लाई बढावा दिनको नयाँ तरीका